warkii.com » Qoraal: Caziiza oo aargoosatay, Miiraan oo Reyyan runta usheegay, shirqoolka Azat iyo dhacdooyinka xiisaha leh goos gooska xalqada 39aad Hercai!!
Qoraal: Caziiza oo aargoosatay, Miiraan oo Reyyan runta usheegay, shirqoolka Azat iyo dhacdooyinka xiisaha leh goos gooska xalqada 39aad Hercai!!
Waxaa xalay lasoo bandhigay goos gooska xalqada 39aad ee taxanaha Hercai inaba caadi ma ahan dhacdooyinka xiisaha leh ee xalqadan lagu arkay fadlan hoos kaga bogo:
Goos Gooska waxuu ka bilaawana Miiraan iyo Reyaan oo sheekeysanayaan waxayna kuwada hadlayaan hadaladan:
Miiraan: Anigu waan khaldanaa balse inaan khaldana waxaa itustay misane ogaaday markaan la kulmay gabadhii taakada balanbaalista ka sameysan timaheeda ugu xirnaayeen (Reyyaan) maalintaas aan arkay gabadhaas waan jeclaaday balse nasiib xumo uma sheegan jaceylkeyga maalintaas waana gabadha khaladka iga saartay.
Reyaan: Waan ka helay, aniga waxaan isku maleynaayey inaan dhintay balse maba ogeyn goobtii geerideyda aan ugu talo galay inaan isla goobtaas nolol cusub ka helay.
Hadaba labadooda hadaladaas waxay ula jeedaan in Miiraan uu wado khaldan oo aargoosi aan jirin uu ku taagnaa balse markuu Reyyan la kulmay misane jeclaaday uu wadadaas ka leexday iyadana ay tustay khaladkiisa.
Dhanka kale Reyaan waxay kawadaa iyadana inee isdili rabtay markuu qiyaanay Miiraan balse markaas uun nolol cusub u bilaawatay halkii ay kadhiman laheed.
Muuqaalka xiga waxaa nala tusaa Caziiza oo guriga ka saareyso Sultana iyo gabadheeda Gonul Aslanbey iyo iyada oo dhaaraneyso misane leh “dadka waxay ogaan doonaan Caziiza Aslanbey qofka ay tahay” waliba qabriga Elif ayee joogtaa sida nala tusaayo.
Kadib Azat ayaa telefaan loo soo diiraa meel ayaana lagu balaminaa mana la oga cida uwacday balse waxaa nala maqashiina Miiraan hadalkiisa isagoo leh,”Ayeeydey hader cidna waxba ma gaarsiin karto waayo aniga la’aantey aargoosi ma sameyn karto anigana marhora aargoosigaas kasoo baxay hadaba Azat ayaa soo baxaayo markii hadalkaas nala maqashiiyo waxayna u badantahay in Miiraan yahay qofkuu Azaat la hadlaayey.
Miiraan iyo Reyaan ayaa guriga reer Shadalogu imaanayaan balse reerka ayaa hub ku qabanayaan Miiraan waxaana meesha joogo Furat oo dhahaayo”Azat waa la toogtay kadiban Handaan ayaa suuxi doonto muuqaalka xiga waa Caziiza oo Asmaa usheegeyso inee aargoosatay xiligaas wixiii ka dambeeyana aysan ciil qabin.
Kadib waxaa nala tusaa nin dhabarkiisa uu kusawiran yahay dib-qalooc ama hanqaraarac waxaana darbiga ugu dhagsan sawiraa Reyaan waxaadna mooda nin cusub oo cadow ah inuu soo baxaayo kaaso Reyaan doonayo.
Dhamaad goos gooska halkaasu ku dhamaana waa 18-September iyo xalqada dhameestiran oo la wada sugaayo.